PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-09-09 - Ube yimpumelelo umkhosi womhlanga
Ube yimpumelelo umkhosi womhlanga
lmvula nokuduma kuyihlehlisele inamuhla inkulumo yesilo
Ilanga langeSonto - 2018-09-09 - Izindaba - CEBO BUTHELEZI Bheka nasekhasini 7 no-18.
IZINKUMBI zezimbali zesizwe zitheleke kwezwakala esigodlweni sesilo Samabandla esisenyokeni, Kwanongoma, zizogubha umkhosi womhlanga waminyaka yonke.
Izintombi ezisuke zize kulo mkhosi ziqhamuka esifundazweni ikwazulu-natal, egauteng, empumalanga ngisho naseswaziland. Lo mkhosi uhlonishwa kakhulu yisizwe sikazulu kwazise ukhuthaza ukuziphatha kahle kwamatshitshi.
Ukugcina ubuntombi yinto eseqhulwini njengoba omama ngokwezifunda, ngokubambisana nondlunkulu, beqinisekisa ukuthi izintombi ziyahlolwa futhi azigcwelezwa ngabafana.
Izinyane lesilo, ungcebo Zulu (13) ozalwa ngundlunkulu umamchiza wasenyokeni, uhole phambili izintombi ziyokwethula umhlanga konga- ngezwe Lakhe khona enyokeni. Umviliyelo wezintombi ubuhambisana nokukhala kwemfengwane, zicula amaculo ngokwamaqoqo azo lapho ziphuma khona ngokwezifunda zazo nangokwezizwe zamakhosi.
Bezihlobe ngemibalabala, zibhince amabhayi, imitsha, izidiya, ubuhlalu obunhlobonhlobo obekwenza ubuhle bemvelo bubuzwe Kwanongoma.
Kujwayeleke ukuba isimo sezulu sishise, likhiphe umkhovu etsheni, kodwa kulokhu izulu belilihle ekuseni limboze ngamafu, kufudumele.
Ezokuphepha beziqiniswe ndawo zonke, abosizo oluphuthumayo bebenkanisile ukuze kuqinisekiswe ukuthi izimbali zesizwe ziphephile.
Induna ye-zintombi zonke, unks udolly Masango (28) wasenkunzana Kwanongoma, lapho kukhona isigodlo sesilo sakwakhangel’ Amankengane, uthe ujabule kakhulu ukubona izintombi zibuthelene kulo mkhosi.
“Ngazikhethela ukuhambela lo mkhosi. Ngazibekela ukuthi eminyakeni ethile ngiyafisa ukuthola umendo, kodwa uma kungenzeki ngizoqhubeka ngiziphathe kahle,” kusho udolly.
Omunye wabantwana baseNdlunkulu, unkk usphiwe oganele kwadilange, emtubatuba, uthe umsebenzi wakhe wukuhambisana nondlunkulu besilo uma behambela izifunda, beyohlangana nomama abangonomehlo, ababheka izintombi indlela eziziphethe ngayo.
Isilo sigcine singayethulanga inkulumo yaso yosuku ngenxa yesimo esibi semvula kwazise bese liyidliva futhi seliduma kabi ntambama. Umntwana umbonisi, uthe isilo sesizoyethula namuhla inkulumo yaso.
BEZIHLOBE ngemibalabala, zibhince amabhayi, imitsha, izidiya, ubuhlalu obunhlobonhlobo izintombi ngesikhathi ziviliyela, zicula amaculo ngokwamaqoqo azo lapho ziphuma khona ngokwezifunda zazo emkhosini womhlanga.